कांग्रेसले आज देशभरि प्रदर्शन गर्दै, क कस्ले कहाँ सम्बोधन गर्दै | DNFMEDIA
पहिरोले घर पुरिँदा गुल्मीमा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु
असोज १० गतेदेखि मुक्तिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्दै
यमनाथ घिमिरे क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित
मिस नेपाल युएसको १० औं संस्करणमा १० प्रतियोगी भिड्ने
काठमाण्डौमा ‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड’ आयोजना हुँदै
आगामी निर्वाचन जित्न १४ औं महाधिवेशनको भूमिका महत्वपूर्ण
कस्तो छ बहुपति प्रथामा आधारित चलचित्र ‘टुल्की’ ?
एमसीसी देशको अहितमा छः ठाकुर
एमसीसी पारित गरे कहाँ भाग्छन् नेताहरु ?
कांग्रेसले आज देशभरि प्रदर्शन गर्दै, क कस्ले कहाँ सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा ओली विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आज देशभरि विरोध प्रदर्शन गर्दैछ ।
कांग्रेसले फागुन ३ गते सोमबार देशभरि विरोध सभा र जुलुसहरू गर्न लागको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले रुपन्देहीको भैरहवामा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । सोही सभामा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले धादिङको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । महामन्त्री डा.शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले दाङको घोराहीमा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
सह–महामन्त्री डा।प्रकाशशरण महत र पूर्वसांसद राजिव शाहीले सिरहामा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ललितपुरको जावलाखेलमा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले ललितपुरको सभालाई सम्बोधन गर्नेछन ।
केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले धनगढीको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
केन्द्रीय सदस्य एवम् नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले रौतहटको गौरमा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
कांग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले ओखलढुंगाको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । सोही कार्यक्रमलाई केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डीना’ले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यद्वय सरिता प्रसाइँ र गगन थापाले चितवनको भरतपुरमा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले काठमाडौंको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पोखरामा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । भक्तपुरमा हुने विरोध सभालाई केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशी र नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम चापागाइँले सम्बोधन गर्नेछन् ।
केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले ताप्लेजुङको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला गृहजिल्ला झापाको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले दार्चुलाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन् । डा.मीनेन्द्र रिजालले प्यूठानमा सम्बोधन गर्नेछन् । नेता डा।रामशरण महतले काभ्रेमा हुन गइरहेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले बैतडीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन् । केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले रोल्पाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरले बझाङमा आयोजना हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
Previous: सुप्रिया र सृष्टि ‘लिटिल मिस हेरिटेज नेपाल २०२१’
Next: डा. उपाध्यायद्वारा लिखितउपन्यास ‘कफी लभ’ लोर्कापण